Super Bright n'èzí ada ámá egwuregwu ìhè 960W China Manufacturer
Nkọwa:Led Outdoor Light 960w,Mmiri Iju Mmiri Na-aga n'Ihu 960W,Ike Dị Ike 960W Led Stadium Light
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu n&#39;èzí > Super Bright n&#39;èzí ada ámá egwuregwu ìhè 960W
Ihe Nlereanya.: BB-LD-960wW-Q
✔ 130 LUMENS PER WATT - Nke a elu mmepụta ikanam Stadium ìhè 960W nwere ọnụ nke 124,800lumens. Ebube elu mmiri dị elu 5000K na-egbuke egbuke dị mma maka ịmalite nnukwu ụlọ egwuregwu, ebe ndị egwuregwu na egwuregwu dị ka ụlọ nchịkọta basketball, ụlọ tennis na ebe bọl, ma ọ bụ ebe ndị ọzọ buru ibu.
✔ IP67 RATED - Nke a na nnukwu mmiri idei mmiri nwere Ntuchi nchebe nke 66, nke pụtara uzuzu na-echebe ma na-echebe site na imikpu mmiri. Ihe a na-eme na nke a n'èzí na-adabere na ntinye akwụkwọ IP67 na-eme ka ntinye gị na-enye ihe ndị ahụ.
✔ 50,000 HOURS & EFFICIER ENERGY - 960W Ejiri ọkụ na -eme ka egwuregwu ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe dị ka 50,000+, na-ewepụ mkpa ọ dị iji dochie ihe ntanetị. Site na dochie HIP / HID / MH bulbs / fixtures na 3000W LED ị na-ebelata ego eletrik gị ruo 80%.
✔ NTỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ - Ngwaahịa a anwalela ma depụta ya site na Laaratories ndị na-ede akwụkwọ ederede 'pụtara na ọ zutere ihe ha chọrọ ma chọpụta iwu nchekwa.
Egwuregwu Egwuregwu Led na-acha ọkụ ọkụ 500W 65000LM Kpọtụrụ ugbu a
1000 Watt Led Stadium Light 130000lm 5000k Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Baseball Football Led 600W Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu egwu kachasị mma 800W 10400LM Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu egwu ọkụ 400W 52000LM Kpọtụrụ ugbu a
Led Outdoor Light 960w Mmiri Iju Mmiri Na-aga n'Ihu 960W Ike Dị Ike 960W Led Stadium Light Led Corn Light 60W Led Corn Light 100w Led Corn Light E26 Led Street Light 300w Led Stadium Light 960W